Print Email 680
၁။ တစ် နေသောအရာဝတ္ထုထွက်ကျသွားစေရန် လက်ပြင်းရိုးနှစ်ခုကြားရှိ ကျောအလယ်ကို ငါးကြိမ် ရိုက်ပေးပါ။ မရပါက ၀မ်းဗိုက်အထက်ပိုင်း ရင်ညွှန်ရိုးနှင့် ချက်ကြားကို လက်သီးဆုတ်ခံ၍ ငါးကြိမ်ပင့် တင်ပေးပါ။
ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ပေးခြင်းကြောင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွင် အားပြင်းသော တုန်ခါမှုနှင့် ဖိ အားဖြစ်စေပြီး တစ်နေသောအရာကို ထွက်ကျသွာစေနိုင်ပါသည်။ တစ်နေသောအရာထွက်ကျသွားပါ က အသက်ပြန်ရှူနိုင်ပါမည်။
၂။ တစ်စုံတစ်ယောက် အသက်ရှူကျပ်နေပါက အကူအညီတစ်ခုခုရရန် နီးစပ်ရာကျန်းမာရေးဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်းသို့ သွားရောက်ပြသပြီး ဆေးကုသမှုခံယူပါ။
ရင်ညွှန်ပိုင်းကို မည်သို့ ပင့်တင်ပေးရမည်နည်း။
ဆို့နေသောလူနာ၏ နောက်တွင်ရပ်နေပြီး ၄င်းကို ချိုင်းအောက်မှ သိုင်းဖက်ပါ။ မိမိလက်တစ် ဖက်မှ လက်မကို အတွင်းတွင်ထားပြီး လက်သီးဆုပ်ပါ။ ၄င်းလက်သီးဆုပ်ကို အခြားလက်ဖဝါးဖြင့် အုပ် ကိုင်ပြီးနောက် လူနာ၏ ရင်ညွှန့်ရိုးအလယ်တွင်ထားပါ။ ထို့နောက် မိမိလက်သီးဆုပ်ကို လူနာ၏ ရင် ညွန့်မှစ၍ အတွင်းနှင့် အပေါ်သို့ခပ်ဆတ်ဆတ် (၅) ကြိမ်ပင့်တင်ပါ။ အထက်ပါနည်းကို တစ်နှစ် အောက်ကလေးငယ်များ အတွက်အသုံးမပြုရပါ။
ကလေးတစ်ယောက် ဆို့နင့်နေပါက အရွယ်ရောက်သူတစ်ယောက်အတွက် သုံးသောနည်းလမ်းအ တိုင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ငါးကြိမ်လက်ဖဝါးဖြင့် ရိုက်ပေးခြင်းနှင့် ရင်ညွန့်တွင်ငါးကြိမ် ပင့်တင်ပေး ခြင်းသည် ကလေးငယ်များနှင့် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ပွင့်စေနိုင်ပါ သည်။ ဆို့နင်နေသော အရာဝတ္ထုထွက်ကျလာစေရန် ကလေးငယ်ကို ခြေထောက်မှကိုင်ကာ ဇောက် ထိုးအနေအထားဖြင့် တွဲလောင်းချမထားသင့်ပါ။ ထိုကဲ့သို့ထားမိပါက မသက်သာသည့်အပြင် ပို၍ဆိုး သွားစေနိုင်ပါသည်။
အသက်ရှူကျပ်နေသောကလေးငယ်ကို မည်ကဲ့သို့ ပြုစုရမည်နည်း။
တစ်နှစ်အောက်ကလေးများ ဆို့နင်နေပါက ကလေးကို ရင်ဘတ်အောက် အနည်းငယ်နိမ့်ရုံ ခေါင်းငိုက်စိုက်အနေအထား ထား၍ လက်ပြင်နှစ်ခုကြားငါး ကြိမ်ထုရိုက်ပေးပြီး ရင်ညွန့်အလည်တည့် တည့်ကို လက်သီးဆုပ်ခံ၍ ငါးကြိမ်ပင့်တင်ပေးပါ။ တစ်နေသောအရာဝတ္ထုထွက်ကျလာသည်အထိ (သို့) ကလေးအော်ငိုသံ ကြားရသည်အထိ ထပ်ခါထပ်ခါ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အထက်ပါရှေးဦးပြုစုခြင်း နည်းလမ်းများအတိုင်း ကြိုတင်လေ့ကျင့်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
1. သူမကို နှခေါင်းမှ ကြိုးစားပြီး အသက်ရှူရန်တိုက်တွန်းပါ။
3. သူမ၏ကျောကို ငါးချက်လောက်နာနာထုပေးပါ။
4. ပေါင်မုန့်(သို့) ထမင်းအနည်းငယ်ကို မျိုချခိုင်ပါ။